Raad-raacayaasha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Track Link Factory
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Bulldozer Track Link Chain D4 D6D D6H D6K D6G
Bonovo waxay siisaa isku xidhka isku xidhka wadada isku xidhka ah, kani waa badeecadaheena caanka ah ee dhulka hoostiisa mara. Baaxaddeena ganacsi ee taxanaha qaybaha hoosta ayaa inta badan ah qeybaha dayactirka ee dhulka taabanaya loona adeegsanayo dhaq-dhaqaaqa mashiinka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Excavator Track Link Chain EX50 EX135 EX200-1 EX300
Iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee alaab-qeybiye ee heerka koowaad ee warshadaha, isku xirka tareenka silsiladda ah wuxuu qaataa kuleylka kuleylka kuleylka ah ee sameynta teknolojiyadda si loo hubiyo saxnaanta cabbirka iyo isku-habeynta hadhuudhka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Qodista Track Link Chain SK25 SK75 SK230 SK350
Bonovo waxay siisaa isku xidhka isku xidhka wadada isku xidhka ah, silsilad isku xidha oo la saliidaynaya oo loogu talagalay qodista iyo cagaf cagafyada, wadada isku xidhka wadada isku xidha oo u dhaxaysa 90mm ilaa 317mm. Waxaan isticmaalnay daaweyn kuleyl oo ka sareysa si loo hubiyo adkaanta isku xirnaanta wadada, biinanka iyo baadiyaha sidoo kale waxaa lagu daaweeyay kuleyl heer sare ah oo la demiyay si loo hubiyo cimri dherer xiran.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Iskuxirka Chain D155a D155a-1 D155a-2
Bonovo waxay siisaa isku xidhka isku xidhka wadada isku xidhka caadiga ah, qaybaha dayactirka ee dhulka taabanaya loona isticmaalo dhaqdhaqaaqa mashiinka. Tani waxay u baahan tahay dusha sare ee xoogga kabaha raadadka iyo iswaafajin kaamil ah balka. waxaan ku siin karnaa tiro noocyo kala duwan ah. Sidoo kale waxaan sameyn karnaa muunad ku saleysan baahidaada inaad tijaabiso alaabtayada.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Excavator Track Link Chain PC30 PC80 PC100-5 PC240
Bonovo waxay siisaa labada iskuxir ee iskuxirka wadada iskuxirka, waxaan kuusoo bandhigi karnaa qaybo kaladuwan oo ah qeybaha meherka ee loogu talagalay inta badan noocyada qodda iyo mashiinada kale ee diir. Iyada oo in ka badan Toban Sano oo Shaqaale Khibrad Leh ay ugu halgamayaan kaamil ahaanta geeddi socod kasta, Bonovo waxay sii wadaysaa bixinta tiro aad u tiro badan oo ah Qaybaha Guuriska ee Xooggan oo leh Qiimaha ugu Fiican Caalamka.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Wadada Iskuxira Chain CAT330 CAT349 E110B E324
Gacanta pin-ku waxay qaadataa daaweyn adag oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo gudaha ah si loo hagaajiyo iska caabbinta dusha sare iyo culeyska saameynta asaasiga ah.
BONOVO Qaybaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Xariirka Jidka Chain VIO18 VIO35 VIO70
Tani waa badeecadaheena caanka ah ee gawaarida hoose.
Baaxadeena ganacsi ee taxanaha qaybaha hoosta ayaa inta badan ah qeybaha dayactirka ee dhulka taabanaya loona adeegsanayo dhaq dhaqaaqa mashiinka.